Kedu ihe bụ Inconel? Kedu ihe bụ njirimara nke Inconel?-Industry News-Hunan Allianz Metal Products Co., Ltd.
Kedu ihe bụ Inconel? Kedu ihe bụ njirimara Inconel?
Oge: 2021-07-31 HITS: 2
Inconel bụ nickel, ígwè, na cobalt dabeere na alloy emepụtara maka ngwa ebe 2113 chọrọ ihe ndị dị mma na-arụ ọrụ na kemịkal na okpomọkụ dị elu. Inconel 718 bụ 5261 mmiri ozuzo siri ike nickel-chromium alloy; ọdịnaya nickel dị elu nke Inconel 600 na-eme ka alloy nwee nguzogide siri ike na nrụgide chloride cracking corrosion nke 4102 na 1653, ma nwee ike ịnọgide na-enwe nguzogide corrosion dị elu na steeti mbelata. Ma ọ nwekwara ike corrosion eguzogide na alkaline ngwọta; Inconel X-750 alloy bụ tumadi superalloy dabeere nickel na γ, Ti, Nb)] na-agba ume ịka nká, wdg.
Inconel nwere usoro nke otu usoro yana nwee nsogbu ndị yiri ya na austenitic igwe anaghị agba nchara n'oge ịgbado ọkụ, dị ka ịgbado ọkụ ọkụ cracks, weld pores, na intergranular corrosion nke welded nkwonkwo.
(1) Mmetụta nke mgbawa ọkụ ịgbado ọkụ
Inconel ịgbado ọkụ mgbe ụfọdụ na-emepụta nnukwu cracks, micro cracks ma ọ bụ abụọ nke weld. Ihe na-akpata mgbawa okpomọkụ bụ ngwakọta nke sọlfọ, lead, phosphorus ma ọ bụ ọla ndị na-agbaze dị ala na-emepụta ihe nkiri dị mkpa nke intergranular ma mee ka mgbakasị siri ike na okpomọkụ dị elu. N'ozuzu, ọ na-akpata ya site na ntinye nke na-abanye n'elu n'akụkụ intergranular. Na mgbakwunye, ntinye ọkụ ịgbado ọkụ dị oke ibu, nke na-eme ka nkwonkwo ịgbado ọkụ na-ekpo ọkụ ma na-emepụta mkpụrụ osisi. Ụfọdụ kristal eutectic na-agbaze dị ala na-elekwasị anya na oke oke ọka kọlụm. Ha nwere obere ike na elu brittleness, na dị mfe na-etolite na-ekpo ọkụ cracks n'okpuru omume nke ịgbado ọkụ nrụgide. Mgbe a na-emechi arc ahụ, a naghị ejupụta oghere arc, oge nrụrụ dị ugbu a dị mkpụmkpụ, ọnụ ọgụgụ nke ọla edobere na arc dị ntakịrị, olulu ahụ na-apụtakwa, ike ya adịghị ike, ọ dịkwa mfe ịmepụta micro-cracks. na arc n'okpuru omume nke mgbanwe mgbanwe nrụgide na igbochi nrụgide.
(2) Nzukọ ahụ dị mfe ịbụ nke siri ike
N'okpuru mmetụta nke okpomọkụ n'oge ịgbado ọkụ, weld seam na base metal na-adịkarị mfe ekpo oke ọkụ, na-eme ka kristal ọka na-enweghị isi na-eweda n'ibu Njirimara na corrosion iguzogide nke nkwonkwo.
(3) Igwe mmiri anaghị enwe mmiri na-adịghị mma, ọ naghị adị mfe ịgbasa mmiri na ịgbasa, ọ na-enwekwa ntụpọ dị ka nke a na-egbutughị ya na nke a na-ejighị ya.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ịgbado ọkụ ugbu a na-abawanye, fluidity nke mmiri mmiri weld metal enweghị ike imeziwanye, ma ọ ga-eweta mmetụta. Nnukwu ịgbado ọkụ ugbu a ọ bụghị naanị na ọ ga-ekpo ọkụ n'ọdọ mmiri weld ma mee ka enwere ike ịgbawa ọkụ, mana ọ na-emekwa ka igwe weld deoxidizer gafere oke evaporation na-abawanye porosity.
(4) Mmetụta na stomata
Inconel, karịsịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị ọcha nickel, wdg, n'ihi obere oghere mmiri na-adịghị mma na mmiri adịghị mma, ọ dị mfe ịmepụta pores mgbe ịgbado ọkụ na-adị ngwa ngwa. Oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon dioxide, na carbon monoxide gas nwere nnukwu solubility n'ime mmiri Inconel a wụrụ awụ, ma solubility ha na steeti siri ike na-ebelata nke ukwuu. Mgbe ịgbado ọkụ na-adabere na nickel na-agbanwe site na oke okpomọkụ gaa na oyi, gas dị na metal a na-echekwara Ihe solubility nke pyruvate na-ebelatakwa ya. Gas a tọhapụrụ n'ime nickel mmiri mmiri na mmiri adịghị mma enweghị ike ịfebiga ya kpamkpam tupu ike nke Inconel alloy welding seam ka ọ bụrụ pores.
(5) The omimi nke weld metal penetration
Omimi ntinye nke ụfọdụ ọla inconel weld bụ naanị otu ọkara nke ígwè carbon nkịtị.
(6) Corrosion na mpaghara ịgbado ọkụ
Mgbe Ni-Mo alloy na-agafe mpaghara mmetụta uche (1200 ℃～1300 ℃ na 600℃～900℃), a na-ebuli usoro molybdenum bara ụba n'akụkụ oke ọka, na-ebute mpaghara Mo depleted na corrosion intergranular.
Kedu ihe bụ Nickel Alloys? Kedu ihe nhazi nke nickel Alloys?